Qalisa ku-Gecko: IMozilla ifuna ukuba kuselula yakho | Kusuka kuLinux
Qalisa ku-Gecko: IMozilla ifuna ukuba kuselula yakho
I-Mozilla ukhiphe ezinye izithombe ze Qalisa ku-Gecko (aka b2g) uhlelo lwayo ukunika amandla iWebhu njengenkundla evulekile yamadivayisi eselula.
Uma kungakhathaza lokhu Android, Windows Mobile kanye nezinye izinhlelo ezitholakalayo? Yebo, njengoba ungafunda kufayela le- Imibuzo Evame Ukubuzwa de b2g cha, ngoba inhloso ukuthi ingasebenza kunoma iyiphi idivayisi yeselula kungakhathalekile ukuthi usebenzisa yiphi ipulatifomu. Ngabe kuzoba yinto efana negobolondo? Kuzofanele silinde ukuyibona isebenza.
Njengamanje kwenziwa izivivinyo ku- I-Samsung Galaxy SII, futhi onjiniyela basebenza kuma-chipset eQualcomm ngenkathi izingxoxo nezivumelwano zenziwa nabalingani abahlukahlukene (i-OEM). Ucabangani?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Qalisa ku-Gecko: IMozilla ifuna ukuba kuselula yakho
Lokhu kungenza ngicabange ukuthi ngisebenzise inqama ne-rom kuphela kwabambalwa abanenhlanhla ...
«Ucabangani?»… Uma ngikhuluma iqiniso, ngicabanga ukufonela lo Ally ocingweni… 😀… LOL !!!
… Ngokushayela u-555224 ……
UJuaz! Ngisho noma uCubacel ekuvumela ukuthi ukhulume naye imizuzu engu-5 ngaphandle kokuphelelwa ibhalansi .. 😛
ICubatel ...? Unkulunkulu ...
Manje nginezizathu zokusebenzisa leyo mizuzu yamahhala ukukhuluma ne-US XD
Ukuphawula akuhlekisi kangako, bese-ke ngisho ukuthi uyi-reggaetoneros enonya.
Ucishe waba mubi kunabo benza lawa mazwana angasile.
Ngicabanga ukuthi umdala ngokwanele ukuthi ungenzi imibono yobuntwana ukuze unakwe.
Ukushintsha ukubukeka kuzoba lula njengokushintsha i-CSS,
Ngakolunye uhlangothi njengonjiniyela wewebhu kungaba lula: D!
iqiniso ngicabanga ukuthi lesi kungaba yisona sizathu sokuthi ngithenge ifoni "ehlakaniphile" eqenjini leMozilla. Ngizwile ngale vidiyo lapho behlola khona idemo ye-boot2gecko ku-Samsung Galaxy
Yebo, kubonakala kungumbono omuhle. Ngokwokuthile engikufunde laphaya ngezidingo zamaphakathi nobubanzi ku-Android (cishe i-600Mhz yeprosesa kanye ne-256MB ye-RAM) ungayenza isebenze, inqobo nje uma ungasebenzisa ama-Custom Kernels (awakwa-Motorola aboshiwe, futhi ambalwa U-Sony Ericsson ...). Futhi iqiniso lokuthi yingakho iDual-Boot ingenziwa kuzokwenza kube ngcono kakhulu.
I-PS: Ubani ongisekelayo ukuthi le kungaba yi-OS ephelele yeselula yeNano? 😛
[Wenza kanjani] Sebenzisa iphaneli le-Xfce njengedokodo elingasindi nelisebenzisekayo